ပြောင်းဖူးနာကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ - လှည့်ကွက်, အကြံပြုချက်များနှင့်ကုစား | Bezzia
Susana godoy | | အလှအပကုသမှု
သင်သိနှင့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပြောင်းဖူးရှိခြင်းသည်လူ ဦး ရေအကြားတွင်အတော်အတန်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ တခါတရံခြေထောက်pressureရိယာ၌ဖိအားပိုလျှံမှုကြောင့်ဤကြွက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။ အမှန်မှာအချို့သောအခိုက်အတန့်များတွင်သူတို့သည်လိုအပ်သောအရာထက် ပို၍ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီတော့ဒီနေ့ငါတို့ပြောကြတယ် နာကျင်စေသောခြေထောက်မှပြောင်းဖူးကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း.
အရေပြားထူလာပြီးဆဲလ်သေများစုဆောင်းမိလာသည်။ ဤသည်ပြောင်းဖူးအစပြုပုံပါတကား! ဒါဟာအကြောင်းတရားများကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်လည်းဖြစ်ကြောင်းမှန်သည် ပြောင်းအမျိုးအစားများ, ဒါဆိုမင်းဘယ်ဟာကမင်းရဲ့နက်နက်နဲနဲသိရမှာလဲ၊ ပြီးတော့အလျင်အမြန်နှုတ်ဆက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်။ စစကြရအောင်။
1 ငါ့ခြေထောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ callus တွေဘာကြောင့်ပေါ်လာရတာလဲ
3 အိမ်ကုစားနှင့်အတူခြေထဲကနေ calluses ဖယ်ရှားပစ်ရန်
3.1 Pumice ကျောက်, သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်
ငါ့ခြေထောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ callus တွေဘာကြောင့်ပေါ်လာရတာလဲ
အဆိုပါတစ်ခုမှာ ခြေထောက်ပေါ်ရှိသန္ဓေသားလောင်းများ၏အဖြစ်များသောအကြောင်းရင်းများ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေပြားကဖိအားတွေ၊ဒါကြောင့်ဖိနပ်ဟာသူ့ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ၎င်းသည်အရေပြားကိုလိုအပ်သောအရာများထက်ပိုထူလာစေပြီး၎င်းအားကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ကြီးလေးသောပြproblemနာမဟုတ်သော်လည်းခြေဖ ၀ ါးနှင့်လက်ချောင်းtheရိယာနှစ်ခုလုံးတွင်ပြောင်းဖူးများပေါ်လာခြင်းကြောင့်နာကျင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရှုပ်ထွေးareasရိယာများနှင့် ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ပွတ်တိုက်နေ ဦး မည်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့ ၀ တ်ထားသောဖိနပ်ကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဖိနပ်ကိုအပြစ်တင်တာသာမကပဲပြောင်းဖူးအတွက်အကြောင်းရင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ခြေရာ ဒါကြောင့်လည်းအခြားအကြောင်းမရှိနိုင်ပါတယ်ကျနော်တို့အလေးချိန်ဖြန့်ဝေခြင်းမရှိဘဲ, တစ် ဦး သတ်သတ်မှတ်မှတ်inရိယာ၌ဖိအားပေးမှုဖြစ်နိုင်သည်ကတည်းက။
ဒါဟာသူကပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်၊။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်အရေပြားကအခွံတွေစဖြစ်လာပြီးဒါကပြောင်းဖူးရဲ့အသွင်အပြင်ကိုအားပေးတယ်။
တဖကျတှငျကြှနျုပျတို့ရှိသည် မာကျောမှုအရေပြား၏အစွန်အဖျားအလွှာများ၌ဖြစ်ပေါ်သောအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားအဝါရောင်အရောင်ချန်ထားခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်။ သူတို့ဟာအပြင်ဘက်မှာကြီးထွားလာတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိထားမိမှာပါ၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကများသောအားဖြင့်ဘယ်နာကျင်မှုမှမသယ်ဆောင်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာသတင်းအချက်အလက်တွေပိုများတယ်.
Helomas တွေဟာမာကြောမှုအောက်မှာရှိသူတွေပါ ကျနော်တို့ရုံဖော်ပြခဲ့တဲ့သော။ ဒါကြောင့်တခါတလေသူတို့ကိုတွေ့ဖို့မလွယ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့သတိထားမိမယ်၊ ၎င်းတို့အနက်အချို့သည်ခြေထောက်တစ်ဖက်၌ပေါ်လာပြီး 'ကြက်၏မျက်စိ' ဟုခေါ်သောခြေချောင်းများ၏နေရာတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်လက်ချောင်းလေးတွင် dorsal heloma ကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အကြောင်းရင်းကားအဘယ်နည်း။ ဖိနပ်၏ပွတ်တိုက်မှု။
ခက်ခဲသို့မဟုတ်ပျော့ပြောင်းဖြေ - အမျိုးအစားတွေထဲမှာ၊ သူတို့ရဲ့ပြီးမြောက်မှုတွေကပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုပြီးယေဘူယျအားဖြင့်ခက်ခဲတဲ့သူတွေကသာမန်အားဖြင့်သာလွန်ထူးခြားမှုရှိလို့ပဲ။ ငါတို့လက်ချောင်းတွေကြားမှာရှိနေပေမယ့်သူတို့ကပိုပျော့လာလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလက်ချောင်းတွေကြားမှာပေါ်လာပြီးအစိုဓာတ်ပိုများလို့ပါ။
ကျနော်တို့ဖော်ပြတဲ့အခါ သွေးကြော callusesသူတို့ဟာမာကျောတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာသွေးကြောတွေရှိတယ်။ သို့သော်အားလုံး၏အာရုံကြောသွေးကြောမျှင်များဟုခေါ်သောသွေးကြောများသည်သွေးထွက်ခြင်းကြောင့်အများဆုံးနာကျင်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖနောင့်inရိယာ၌ရောအရေပြား၏တစ် ဦး တည်းသောနေရာ၌ပါပေါ်တတ်ပြီးများသောအားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
အိမ်ကုစားနှင့်အတူခြေထဲကနေ calluses ဖယ်ရှားပစ်ရန်
ငါတို့လက်ချောင်းထိပ်နားတွင်ရှိသောပထမဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာနောက်တစ်ခုဖြစ်သည် ပြောင်းများအတွက်အိမ်မှာကုစား။ သင်၏ခြေထောက်သို့မဟုတ်ခြေချောင်းများမှ callus တစ်ခုကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ ယခုကိစ္စအများစုတွင်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Pumice ကျောက်, သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်
နာကျင်သည့်ပြောင်းဖူးတွေအကြောင်းမပြောခင်ကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာပါတယ်။ ကောင်းပြီ အကောင်းဆုံးအိမ်မှာကုစားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွားထံမှ ကျောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသင်သည်သင်၏ခြေထောက်ကိုရေပူထဲထည့်ပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်ကျောက်တုံးကိုtheရိယာ၊ ခြေချောင်းများသို့မဟုတ်သင်မာကျောနေသောနေရာမှဖြတ်သန်းသွားရမည်။ နောက်မှသင့်ခြေကိုဆေးပြီးခြောက်ပါ။
၎င်းသည်လက်ခုပ်သံများအများဆုံးချီးကျူးသောကုစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဤထုတ်ကုန်ကိုများပြားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လာလိမ့်မည် သင်၏ခြေကိုရေပူဖြင့်စိမ်ပါမုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှစ်ခုဇွန်းနှင့်အတူ။ နာရီဝက်ခန့်ရေအေးလာပြီးစောင့်နေပါ။
ပြောင်းဖူးများနှင့်ကြံ့များပျော့ပြောင်းစေရန်, သူတို့ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်, ဘာမျှမကဲ့သို့ သေးငယ်သောကြက်သွန်ဖြူနှင့်သံပုရာရည်အနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်ထားသောငါးပိကိုအသုံးပြုပါ။ လက်ချောင်းသို့မဟုတ်နေရာကိုထုပ်ပြီးနာရီဝက်လောက်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးရေပူဖြင့်ကောင်းစွာဆေးကြောပါ။
ကြက်သွန်ဖြူထိရောက်မှုရှိသော်လည်းကြက်သွန်နီသည်နောက်ကျကျန်နေသည်။ သူမကိုကျေးဇူးတင်လို့ပဲ ကျနော်တို့ဘက်တီးရီးယားအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မယ်ပြောင်းဖူးများရှင်သန်နေသောအရာဖြစ်ကြ၏။ ကြက်သွန်နီတစ်ဖဲ့ကိုရောပြီးသံပုရာရည်နဲ့ရေချိုးလိုက်တယ်။ ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကအဲဒါကို callus ပေါ်မှာကပ်ပြီးထုပ်လိုက်တယ်။ ခြေအိတ်၌ တင်၍ ဤဖြေရှင်းချက်ဖြင့်သင်၏အသားအရေပေါ်တွင်အိပ်ပါ။ နောက်တစ်နေ့တွင်သင်ပုံမှန်အတိုင်းဆေးကြောပြီးလျှင်ဆေးကြောပါမည်။
ငါတို့ကြက်သွန်နီကိုလုပ်သလိုပဲငါတို့လည်းအတူတူပဲလုပ်ရမယ် ခရမ်းချဉ်သီးပျော့ဖတ်။ သင်၏ခြေနင်းမှပြောင်းဖူးကိုဖယ်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများမှာ၎င်းကိုနူးညံ့စေလိမ့်မည်။ သင်သည်ပျော့ဖတ်ကိုနေရာချပြီးwrapရိယာကိုခြုံ။ နောက်တစ်နေ့အထိလုပ်ဆောင်ရန်ထားခဲ့ပါ။ သင်သည်းခံပြီးညတိုင်းပြုလုပ်ပါကရလဒ်များကိုမကြာမီတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။
ဒါဟာတွေ့ဆုံရန်လည်းဘုံကြောင်းမှန်သည် အဆိုပါ pi ၏တစ် ဦး တည်းသောအပေါ်နာကျင် callusesနှင့်။ ဤသည်ကကျွန်ုပ်တို့အားတခါတရံမှန်ကန်သောလမ်းတွင်နင်းနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ကုသရန် Podiatrist သို့သွားခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအမြဲတမ်း ပို၍ အေးဆေးငြိမ်သက်စေလိမ့်မည်။ ခြေထောက်တစ်ဖက်၌၎င်းတို့ကို plantar keratoses ဟုခေါ်ပြီးအရေပြားမည်မျှ ပို၍ ခက်ခဲသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်ဖိနပ်မမှန်သည့်ဖိနပ်အားစဉ်ဆက်မပြတ်ပွတ်တိုက်မှုကြောင့်သို့မဟုတ်ခြေလှမ်းတိုင်းကိုခြေထောက်တိုင်းကိုမထောက်ပံ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းကုသမှုအတွက်သင်သည်ထိုofရိယာ၏ပျော့ပျောင်းမှုကိုလိုအပ်သည် ဆားငန်ရေသည်ဗတ်တာမင်ထက်ပိုမိုပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာအသားအရေနူးညံ့သည့်အခါ exfoliate ပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုတိကျသော moisturizer များကိုအသုံးပြုပါ။ gel insoles များကိုအသုံးပြုပြီးအနည်းငယ် ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိသောသို့မဟုတ်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဖိနပ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ နာကျင်မှုဆက်ရှိနေသည်သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်ကိုသင်တွေ့ပါကသင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန်အချိန်တန်ပြီ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသောအခါအသုံးအများဆုံးကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည် ခြေထောက်စောင့်ရှောက်မှု။ ကြက်ဆူပင်များကိုကုသခြင်းအပြင်သူတို့သည်လက်သည်းများကိုသင့်လျော်စွာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ထိုးသွင်းသူများကိုကုသခြင်းနှင့်ဒေါက်မြင့်မားသောစောင့်ရှောက်မှုတို့ကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ပြီးပြည့်စုံသောကုသမှုဖြစ်ပြီးအနာဂတ်ပြproblemsနာများကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတလေပြweနာရဲ့မူလရင်းမြစ်ကိုငါတို့ရှာရမယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လုပ်တာကမနာပါဘူး biomechanical လေ့လာမှု။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းလျှောက်နေစဉ်ဖိစီးမှုများကိုရှာဖွေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြောင်းဖူးပုံစံဖြင့် ပိုမို၍ နည်းပါးသောဝေဒနာများခံစားနေရသည့်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အား ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးသည်။
အခြားကုသမှုများမပြုလုပ်နိုင်ပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်မှာမှန်ပါသည်။ ဒါဟာဆုံးဖြတ်ရန်သူကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟုတ်ကဲ့နာကျင်မှုမပြတ်ဖြစ်လျှင်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် ဒါကပုံမှန်လမ်းလျှောက်တာကိုကာကွယ်ပေးတယ်။
ခြေထောက်ပြောင်းဖူးကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်အမျိုးအစားများနှင့်အကောင်းဆုံးကုစားနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပြီးခဲ့သည့်တစ် ဦး တည်းသောကြမ်းခင်းနှင့်ခြေချောင်းနှစ်ခုလုံးပေါ်လာနိုင်သည့် callus အကြားခြားနားချက်တစ်ခုပြုလုပ်ရမည် calluses များသောအားဖြင့်ဘဝါးထက်ပိုပြီးဖြစ်ကြသည် ဒါပေမယ့်သူတို့နာကျင်ကြောင်းပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းတို့သည်ကိုယ်အလေးချိန်ပိုမြင့်သောနေရာများ၊ ပွတ်တိုက်နေရာများနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနေရာများတွင်ရောက်ရှိနေသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ပျက်စီးချိန်တွင်လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုထိရောက်လိမ့်မည်။
သူကပြောပါတယ်, ငါတို့နာကျင်မှုသောအခါငါတို့သည်လည်းညွှန်ပြစေခြင်းငှါအခြားအန္တရာယ်များသို့မဟုတ်အချက်များအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဆီးချိုရောဂါသို့မဟုတ်သွေးလည်ပတ်မှုပြproblemsနာများရှိသူများ ပြcomplနာများပေါ်ထွန်းစေနိုင်သည် နှင့်ကဲ့သို့, နာကျင်မှုသူတို့ထဲကတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင်ကျူပင်များသို့မဟုတ်အချို့သောခြေထောက်ပုံပျက်မှုများရှိပါကစိုင်းများများပေါ်လာပါကမသက်သာပါ။ အကောင်းဆုံးခြေလှမ်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ကျယ်ပြန့်သောဖိနပ်များ၊ အတွင်းခံများ ၀ တ်ဆင်ထားရန်၊ သင်၏ခြေထောက်များကိုယခင်ကထက် ပို၍ ဖုံးအုပ်ရန်ဂရုစိုက်ရန်အလွန်မြင့်မားသောဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များနှင့်နူးညံ့သောခြေအိတ်များကိုရှောင်ရန်သတိရပါ။ နာကျင်မှုများစွာခံစားရသည့်သင်၏ခြေထောက်မှ callus ကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုယခုသင်သိပြီဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » အလှအပကုသမှု » ခြေထောက်ပြောင်းဖူးကိုဘယ်လိုဖယ်ရမလဲ
သင်စီးနိုင်တဲ့စာအုပ်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးစီးရီး ၅ ခု